Scenario…Itoobiya Oo Isku Badali Doonto Dhulka Dagaalkii Seddexaad Ee Aduunka | Xaqiiqonews
Scenario…Itoobiya Oo Isku Badali Doonto Dhulka Dagaalkii Seddexaad Ee Aduunka
Tobaneeyo qof oo u badan saraakiil iyo mas’uuliyiin ayaa lagu dilay wadanka Itoobiya kadib markii uu dhacay isku day Inqilaab oo ladoonayay in talada looga tuuro Dowladda uu madaxda ka yahay Abiy Axmed.
Wararka ka imaanaya Itoobiya ayaa xaqiijinaya in ladilay Jeneraal Mykonin Syari oo ahaa taliyaha guud ee ciidamada Xabashida Itoobiya, war rasmi ah oo kasoo baxay xukuumadda Addis Ababa ayaa lagu sheegay in mid kamida ilaalada Jeneraalka uu toogashada geystay kadibna gacanta lagu dhigay sida uu sheegay Afhayeenka xukuumadda.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in dilka Jeneraal Mykonin Syari uu qeyb ka ahaa isku day Inqilaab oo lagu doonayay in lagu bedelo maamulka wadanka, goor sii horraysay oo maanta ah ayaa la iclaamiyay in ladilay madaxweynihii ismaamulka gobolka Amhara iyo inta badan madaxdii gobolka.
Sidoo kale Aqriso: Ninkii ugu nasiib badna waxa uu ka badbaaday-burburkii diyaaraddii- Itoobiya
Dowladda Itoobiya waxay sheeganaysaa in ay fashilisay Inqilaab melleteri oo ay soo abaabuleen kooxo ay ugu yeertay “qaswadayaal” balse illaa iyo hadda lama oga xaaladda ka jirta gudaha wadanka sababa laxiriira isgaarsiinta Taleefannada iyo Internetka oo hawada laga saaray.
Dadka ka faalooda arimaha siyaasadda ayaa sheegaya in Dalka Itoobiya uu cagta saaray wadadii dagaalka,waxaana gobolada Waaweyn ee Itoobiya ka socdo hub isku aruursi iyo faruuryo qaniisi taasi oo xaalka ka dhigeysa mid ku socdo “dagaal weyn oo qarxaa”